အာရုဏ်ဦးမှာ မူးသည့်ငါရဲ့ ဒါရိုက်တာ သေဆုံးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » အာရုဏ်ဦးမှာ မူးသည့်ငါရဲ့ ဒါရိုက်တာ သေဆုံးခြင်း
အာရုဏ်ဦးမှာ မူးသည့်ငါရဲ့ ဒါရိုက်တာ သေဆုံးခြင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 5, 2010 in Celebrity, Myanma News, News | 8 comments
A popular Myanmar Director U Tin Than Oo (တင်သန်းဦး) passed away this morning (around 2am) on November 5, 2010 at the Mingaladon Military Hospital, Yangon, Myanmar.
One of his latest movies was အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ, roughly translated to Lotus at Dawn, featuringatotal of 68 actors and actresses. You can read the interview about the movie here.
Director Tin Than Oo is alsoanovelist and has writtenafew novels in his lifetime.
May you rest in peace, Tin Than Oo!
“အာရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ” နအဖ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ရုပ်ရှင်ကားအား ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦး ယနေနေ့လည် (၂) နာရီခွဲခန့် အချိန်တွင် စစ်ဆေးရုံ၌ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပရိတ်သတ်ကြီးက သူခင်များ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ဇာတ်ကားရိုက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြီးအောင်တောင် နေမသွားရရှာဘူး မဲတောင်မပေးလိုက်ရရှာဘူးလို့ တွေးနေတယ်မလား၊ သူ့အတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာက လက်မနှေးပါဘူးခင်များ ဆေးရုံပေါ်မှာ ကြိုတင်မဲထည့်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက် ထည့်သွားရ ရှာပါသတဲ့ ။
သူ့အကြောင်းတော့ တကူးတက ရှာပေးမနေတော့ဘူးဗျာ နော၊ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်လို့ ၊ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သတိထားကြနော် သမီး ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ မဲပေးလို့ရပြီလို့ ခဏဏ မပြောနဲ့နော် ကြိုတင်မဲပုံးကြီးက ရောက်လေရာမှာ အရောက်လာမှာ တိယား
သေရှာပြီလား.. စိတ်တောင် မကောင်းဘူး.. ဆေးရုံမှာ မဲပေးတာ ဆိုတော့.. ခြင်္သေ့လား ဘာပေးလိုက်တာ ဖြစ်မလဲ..
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖွတ် ကိုပဲပေးမှာပဲ သေတာတောင်မဲပေးရသေတယနော် သနာစရာဘ၀လေပါလာ
ပြည်သူတွေရဲ့ မေတ္တာကိုခံယူသွားပါပြီ..။ ဈေးဦးပေါက် သမိုင်းနောက်ပြန် သမားများ၏ မသာပါ။
ပြည်သူများကိုသာ လိမ်ညာလို့ရမယ် မရဏမင်းနဲ့ ငရဲခန်းကို တော့ လိမ် ညာလို့ ရကြပါ့မလဲနော်..။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ အဖေါ်တွေကို လာခေါ်သွားပါအုံး..။
သူက ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ပြီးတော့မှ ပြောသွားသေးတာဆိုပဲ… သမိုင်းကို လိမ်တယ်ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလို မလိမ်ရဘူး… အမှန်တွေထဲကမှ ကိုလိုချင်တဲ့ဟာ ကိုမေးချင်တဲ့မက်ဆေ့စ်ကို ဆွဲပြီးပေးရတာပါလို့…. သူလည်း သူမှန်တယ်ထင်လို့ သူလုပ်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့… လူတိုင်းက ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ကိုယ်လုပ်နေကြတာပဲလေ… ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲကမှ တချို့က ကိုယ်လုပ်နေတာကို မှားနေမှန်းသိတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီအမှားကို ထပ်ပြင်ဖို့ မကြိုးစားတာက ဆိုးတာပေါ့
သေတဲ့ သူလည်း သေရှာပါပြီဗျာ … ဘာလို့အကျိုးမရှိတာတွေ ပြောနေကြမလဲနော် … တကယ်ဆို သူလည်း ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် ခိုင်းတာ လုပ်ရတဲ့မြန်မာပြည်ထဲက မြန်မာ တစ်ယောက်ပါဗျာ … အသော့ အထေ့ တွေနဲ့အပြစ်ဆိုနေမဲ့အစား ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့… သူ့ ရဲ့ စာပေ နဲ့အနုပညာကို ကျွှန်တော်တို့လူသားဆန်စွာ အသိအမှတ် ပြုကြရအောင် .. နော်